သင်၏ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းများ၏ ROI ကိုတိုင်းတာရန် Martech Zone
သင်၏ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းများ၏ ROI ကိုတိုင်းတာရန်
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 23, 2018 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ROI နှင့်ပတ်သက်သောစျေးကွက်နည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဗွီဒီယိုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ်ချစေသောအခွင့်အာဏာနှင့်ရိုးသားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၀ ယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင်၏အလားအလာကိုတွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်သောမယုံနိုင်စရာစာရင်းအင်းအချို့:
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောဗွီဒီယိုများသည်ကူးပြောင်းနှုန်း ၈၀% တိုးနိုင်သည်
ဗွီဒီယိုပါသောအီးမေးလ်များသည်ဗွီဒီယိုမဟုတ်သည့်အီးမေးလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉၆% ပိုမိုသောကလစ်နှိပ်ချက်နှုန်းရှိသည်
ဗွီဒီယိုစျေးကွက်သမားများသည်နှစ်စဉ် ၆၆% ပိုမိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်များရရှိသည်
ဗွီဒီယိုစျေးကွက်သည်အမှတ်တံဆိပ်သိရှိမှုနှုန်း ၅၄% တိုးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
ဗီဒီယိုသုံးသူ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းက ၄ င်းတို့သည် ROI မှကောင်းသည်ဟုယုံကြည်ကြပြီး ၈၂% က၎င်းသည်အရေးပါသောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်နေကြသည်
တစ်ခုမှာထုတ်လုပ်မှု ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ROI ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သင်၏ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း ROI အပါအ ၀ င်သင်စောင့်ကြည့်သင့်သည့်မက်ထရစ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ကြည့်ရှုအရေအတွက်, စေ့စပ်ထားခြင်း, ကူးပြောင်းနှုန်း, လူမှုရေးခွဲဝေမှု, တုံ့ပြန်ချက်နှင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်.
သတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏သက်ရောက်မှုကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်သင်၏ဗွီဒီယိုဖြန့်ဝေခြင်းကိုလည်းပြောပါသည်။ သင်၏ဗီဒီယိုကိုမြှင့်တင်ရန်အီးမေးလ်နှင့်အီးမေးလ်လက်မှတ်များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာများအဖြစ်မျှဝေခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ အနည်းငယ်ထိမိသောနောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူးသည့်အရင်းအမြစ်မှာ Youtube နှင့် search engine optimization ဖြစ်သည်။ သင်ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၌ရှာဖွေမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်မဟာဗျူဟာနှစ်ခုရှိကြောင်းမမေ့ပါနှင့်
ဗွီဒီယိုရှာဖွေရန် - Youtube သည်ဒုတိယအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ သင်အသွားအလာများစွာကိုသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) landing pages သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါဟာအချို့လိုအပ်သည် သင့်ရဲ့ Youtube ဗီဒီယို post ကို၏ optimizationသို့သော် များလွန်းသောကုမ္ပဏီများသည်ဤအပေါ်လက်လွတ်!
အကြောင်းအရာအဆင့် - သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သော၊ ကောင်းမွန်သော၊ အသေးစိတ်ဆောင်းပါးတစ်ခုသို့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းနှင့်ရည်ညွှန်းခြင်းများအတွက်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာကြီးမားတဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအပြည့်အဝ infographic ပါပဲ!
Tags: ကူးပြောင်းနှုန်းအီးမေးလ်ဗီဒီယိုစေ့စပ်ထားခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီဒီယိုမက်ထရစ်ဘယ္လိုတိုင်းတာသည် roiရွယ်ဗီဒီယိုကုန်ကျသည်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးဗီဒီယိုအီးမေးလ်ဗီဒီယိုတုံ့ပြန်ချက်ဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုမက်ထရစ်ဗွီဒီယိုစီစဉ်ခြင်းဗွီဒီယို roiဗွီဒီယိုဝေမျှခြင်းဗီဒီယိုလက်မှတ်ဗီဒီယိုစာရင်းအင်းများကြည့်ရှုအရေအတွက်youtube က
Lexical Onomies: ပြောရလျှင်, Antonymy, Hyponymy, Meronymy, Holonymy
LinkedIn Campaign Manager သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ကင်ပိန်းအစီရင်ခံခြင်းအတွေ့အကြုံကိုထုတ်ပြန်သည်